Jiri LucidPix mee 3D Mee - Ihe To ga -esi-eduzi
Etu ị ga - esi mee LucidPix 3D Mee
Ihe ncheta abụrụla otu n'ime ihe kachasị ukwuu n'oge anyị. Ihe omuma ndi a di mfe na ederede ederede na-ewusi nuggets nke oge gboo omenaala n’ime ebe nchekwa zuru oke nke intaneti, na -eme nkpokorita nkata n’etiti ndi niile na ahu ha.
Ezie na memes bidoro n’onyinyo di mfe na isi okwu, ha agbanweela n’oge, na-agbakwunye n’ime animation site na GIFs na obere vidiyo n’oge ụfọdụ. Taa, mgbanwe a na-aga n’ihu na-ewere nzọụkwụ ya na LucidPix yana ikike Conversgbanwe 3D. Anaghịzi abụ memes, larịị, nke, ma ọ bụ static na okike, LucidPix meme na-emeghachi omume na mmegharị nke onye na-ekiri ya, na-agbakwunye ọhụụ ọhụụ na njiri egwu ephemeral ndị a na ịntanetị.
Kwụpụ 1: Chọta Okwu Gị
Akụkụ dị ukwuu banyere ihe LucidPix bụ bụ na ịkwesighi ịmalite site na ọkọ. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na inwere nnukwu ihe n’uche, inwere ike imeputa onwe gị ihe ọhụụ imgflip.com or makeameme.org, ma ọ bụ ọbụna memebetter.com. N’agbanyeghi otu ị si malite, chekwaa ihe onyonyo igwefoto gị iPhone ma ọ bụ gam akporo smartphone smartphone gị.
Iji nyere aka gosipụta afọ ọhụrụ, anyị họọrọ ihe ngosi banyere enweghị ụgbọ ala na-efe efe:
Kwụpụ 2: Tinye Spacefọdụ Ohere
Ọ bụ ezie na ịnwere ịpụda nzọụkwụ a, memes na-adịkarị mfe ọgụgụ, ma ọ bụrụ na inwere ohere n'akụkụ isiokwu ahụ. Nke a bụ n'ihi na otu akụkụ nke ihe oyiyi 3D zoro ezo ruo mgbe ị na-akpali ekwentị gị iji gosipụta mmetụta 3D. Enweghị obere oghere gbasara isiokwu ahụ, enwere ike ebipụ ụfọdụ ederede meme ma ọ bụ sie ike ọgụgụ.
Ejiri m ngwa a na-akpọ Juxtaposer iji nweta nsonaazụ a, nke bụ naanị iOS. Agbanyeghị, eji m ya maka ntakịrị ihe kpatara m jiri zụta ya ọtụtụ afọ gara aga. Ọ bụrụ na inweghị mmasị ịzụta ngwa ọhụrụ, enwere ọtụtụ nhọrọ ọnụọgụ n'efu karịa maka Android na iPhone na njikọ a.
Iji nye gị meme obere ohere ịgbakwunye n'akụkụ, ịchọrọ nzụlite. Could nwere ike ịga Pexels.com ma budata onyonyo n’efu, ma obu inwere ike imeputa ihe. Maka myme, achọrọ m ihe nwere isiokwu sara mbara, wee soro foto na - esote ya m hụrụ n'ịntanetị.
Ọzọ, agbakwunyere m na dịka ihe ndabere dị na Juxtaposer, yana meme m ka ọ bụrụ ihu ihu, na-ejide n'aka iji mkpịsị aka abụọ iji pịa ma ọ bụ mee ka onyonyo ya dị n’okpuru ya mere enwere ọmarịcha ugwu gburugburu ya. Okpoko ahụ kwesịrị ịbụ ihe dịka 15-20% buru ibu karịa onyonyo meme maka nsonaazụ kacha mma. Mgbe ahụ echekwara m na ekwentị m mepụtara.
Kwụpụ 3: Gbanwee na 3D na LucidPix
Nke a bụ ebe anwansi na-eme. LucidPix ga-ewere nke dị larịị, nke nwere ihe osise memee ma mepụta mkparịta ụka, nke nwere ọtụtụ ihe ga - eweta mbipụta na nkwupụta.
Nke mbụ, mepee LucidPix wee pịa akara igwefoto . Mgbe ahụ, pịa aka ekpe, Fraị 3D gara aga na Foto 3D iji họrọ Mkparịta ụka 3D. A ga-agwa gị ka ịhọrọ onyonyo ịchọrọ itughari ka ọ bụrụ 3D, na nke a, ọ bụ isiokwu nke ị chekwara. Họrọ oyuyo a, pịa igbanye 3D Photo ka LucidPix mee anwansi ya.
Mgbe usoro ntụgharị ahụ nwalere, nwalee ya site na ịgagharị ekwentị gị ka ị hụ etu nsonaazụ ahụ si dị, ma ọ bụrụ na ị nwere ọ ,ụ, pịa bọtịnụ òkè ma zigara ya na Facebook, ma ọ bụ bupụ ya dị ka GIF ma ọ bụ vidiyo maka iji na Snapchat. , Instagram, TikTok na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ enyemaka etu esi ekerịta, ị nọ kechioma! Anyị nwere a blog post na-akọwa kpọmkwem nke ahụ ebe a.
Memnwe obi ụtọ na Memc LucidPix?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na memc LucidPix, mee ka anyị mara! Ọ bụrụ na anyị na-anụ site na ndị zuru oke, anyị nwere ike iwulite usoro a n'ime ngwa LucidPix, maka ịmepụta 3D meme ọzọ dị mfe.
Etu aga-agbanwe Ntụgharị Foto mgbe niile na 3D →← Etu esi ewunye LucidPix beta